Jeneral Xaftar Oo Aqbalay Xabbad Joojin - Awdinle Online
Jeneral Xaftar Oo Aqbalay Xabbad Joojin
January 12, 2020 (Awdinle Online) –Hoggaamiyaha xoogaga ka dagaallama galbeedka Liibiya jeneral Khalifa Xaftar ayaa sheegay in ay aqbaleed xabbad-joojinta ay ku baaqeen waddamada Raashka iyo Turkiga, islamarkaana ay dhaqangelin doonaan wixii ka dambeeya 12 bishan.
Waxyar uun kadib markii ay jabhada Xaftar ay ku dhawaaqeen arrintaas, madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo dhiggiisa Ruushka vladimir Putin oo qadka taleefanka ku wada xiriiray ayaa ka wada hadlay xaaladda kasoo rayneysa ee Liibiya iyo horumarada laga gaaray.
Kooxda uu hoggaamiyo jeneral Xaftar ayaa u dagaallameysa sidii ay ula wareegi lahaayeen magaalada caasimada ah ee Tripoli tan iyo bishii Abril.
Horraantii isbuucii aan soo dhaafnay ayey Turkiga iyo Raashka si wadajir ah ugu dhawaaqeen xabbad-joojin ka dhaqan gasha dalka Liibiya, taasi oo ay aqbaleen labada dhinac ee dawlada iyo jabhada jeneral Xaftar.
Dhanka kale isbuucii lasoo dhaafay ayuu Turkiga billaabay in uu ciidamo usoo daabulo Liibiyo, kadib codsi rasmi ah kaga yimid dawlada uu caalamku aqoonsanyahay ee ka jirta Liibiya.
In ka badan 280 dad rayid ah iyo ku dhawaad 2,000 oo dagallamayaal ah ayaa ku dhintay waxaana ku barakacay 146,000 oo shacab ah tan iyo markii uu bilawday gulufka u dhexeeya dawlada iyo xoogaga jeneral Xaftar, sida ay sheegtay qaramada midoobay.
Previous articleKooxda al-shabab oo Afduubtay mid kamid ah Askarta DANAB
Next articleAl-Shabaab oo fariin hanjabaad ah u dirtay dowladda Mareykanka